Posted by PhyoPhyo at Tuesday, August 30, 2016 Labels: Blog day 2016
3l0g Day3108 (31st day of the 8th month)
အခုတော့ ဒီကာတွန်းလေးထဲကလို ပြောစရာမရှိလည်း ဘလောဂ့်ရေး ပြောစရာရှိလည်း ဘလောဂ့်ရေး အဲဒီလိုမဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ fb status လေးတွေမှာပဲ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အလုပ်များနေကြရတယ်။
ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်တိုက်ခိုက်နိုင်မယ့် ရိုးရှင်းတဲ့နေ့စဉ်အစားအစာလေးတွေ
ကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာ ပုံမှန်ဆဲလ်တွေထက် ကြီးထွားနှုန်းပိုမြန်တယ်ဆိုပေမဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေက တစ်ညတာအတွင်း ကြီးထွားလာကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်ဆာတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ လူနေမှုစတိုင်က ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းကိုလည်း သိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်တယ်။ အလေးထားစရာ/ လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ စားနေကျအစားအစာတွေထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတချို့ကို ပေါင်းထည့်ပေးပါ။ ကင်ဆာကို ကာကွယ်ဖို့ ကူညီပေးပြီး တခြားရောဝါတွေကိုလည်း ဟန့်တားထိန်းချုပ်ထားပါ။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, August 25, 2016 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ
သည်နေ့ မိုးကလေးဖွဲဖွဲ စွေကာ ရွာနေသည်။ ဆာကူရာဆေးရုံ ၉ထပ်မှာ ခြောက်ကြိမ်မြောက် ကင်ဆာ ကုထုံး ခံယူနေသည့် လူနာ အစ်မကို ထိုင်စောင့်ပေးနေရင်း ပြတင်းမှန်ကို လာလာကပ်နေသည့် မိုးစက်မိုးမှုန် ကလေးတွေကို ငေးငေးကြည့်ကာ ကျွန်မစိတ်တွေ ယောက်ယက်ခတ်နေပါသည်။ မှန်ပြတင်းကနေ အောက် ဘက်သို့ နည်းနည်းငုံ့ကြည့်လိုက်လျှင် လူတွေ ခြေချင်းလိမ်လျက် အ၀င်အထွက်ပြုနေကြသည်ကို လှမ်းမြင်နေရ သည်။ ဘုရားသခင်…ဆေးရုံသည် လူဝင်လူထွက် များလှချည့်။ ဘုရားကျောင်းမှာ လူတစ်စတစ်စ နည်းလာပြီး ဆေးရုံတွေမှာ လူတွေဘာလို့များများလာပါလိမ့်။ ဒါကို အဖြေတစ်ခု တွက်ချက် ထုတ်ယူဖို့ ကျွန်မမှာ လုံလောက် သော စိတ်အင်အားမရှိပါ။ ကျွန်မနှလုံးအိမ်ထဲသို့ သောကအပူများ ဆင့်ဆင့်ကဲကဲ ထပ်မံ ၀င်မလာစေရန် အာရုံအလုံးစုံကိုိ facebook နံရံတွေပေါ် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ပစ်တင်လိုက်သည်။ နံရံတစ်ခုပေါ်မှာ ကျွန်မမျက်လုံးတွေ ဖြန့်လည်ကျက်စားမိသွားသည်။
Thanzawoo Sbo ။သည်နံရံပေါ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနှင့် သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို ကျွန်မမြင်သည်။ ဇူလိုင် ၁၉ ကျော်လွန်ကာ သြဂုတ်လကုန်ခါနီး ဒီနေ့ကျမှ ဒီ ဗီဒီယိုကို တွေ့မြင်နားထောင်ဖြစ်ခြင်းမှာ ကျွန်မကို ပိုလို့ လွမ်းအောင်ဖန်နေရော့သလား.............။ Play သင်္ကေတလေးကို တို့ထိလိုက်သည်နှင့် ဆွေးမြမြဂစ်တာ သံက အလွမ်းတစ်စကို ဆောင်ကြဉ်းကာ ကျွန်မ အတွင်းသားထဲထိ လိမ့်ကာလိမ့်ကာ ထွင်းဖောက်တိုးဝင်လာသည်။..အဦးအစ ဂစ်တာသံက ကျွန်မ ရင်ခွင်မှာ အလွမ်းကို သိမ်မွေ့စွာ ပျိုးကြဲလိုက်ပြီ။ ပြတင်းပေါက်က တစ်ဆင့် နွေးမြမြလေပြည်နုကလေး တိုက်ခတ် တိုးဝင်လာသလို အဆိုသံဖွဖွကလေးက မလွမ်းဘဲ မနေနိုင်တော့အောင် ကျွန်မအား သွေးဆောင်ချည်ဖွဲ့လိုက်လေသလား..... သြဂုတ်လ ၂၂ရက်ထဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရာက ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံး ရုတ်တရက်လေး စွေ့ ခနဲ မြောက်လွင့်တက်သွားသည်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, August 21, 2016 Labels: ဂီတဆောင်းပါး
ဂျွန်ရဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ သဘောကျလို့ ခွင့်တောင်းပြီးတင်ထားလိုက်တယ်။
(2016 သြဂုတ်လထုတ် Beauty Magazineမှာရေးဖြစ်ခဲ့ ခံစားမှုဂီတဆောင်းပါးလေးပါ')
ဂီတသည် အရောင်စုံသော ပန်းပွင့်လေးများနှင့်တူသည်
ဂီတသည် ဘာသာစကားကို ကျော်လွန်သော
ဖို၊မ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအလျဉ်း မရှိသော
လူ့နှလုံးသား၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသော
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, August 03, 2016 Labels: မေမေ့ရဲ့စာ
ကျွန်မခေါင်းအုံးနဘေးက စပယ်ပန်းကုံးလေးတွေကို ရေတွက် ကြည့်လိုက်တယ်။တကုံး..နှစ်ကုံး သုံးကုံး..အော် ..သုံးကုံးတောင် ရှိနေမှကိုး။ ကျွန်မဒီကို ရောက်တာ သုံးရက် ရှိနေမှပဲ။ မနက် မနက် လာနေကျ ပန်းသည်မလေးဆီက ဘုရားလှူဖို့ရည်မှန်းပြီး တနေ့တကုံး ၀ယ်ယူခဲ့တာပါ။ ခြောက်သွားတာတောင် ရနံ့ လေးက သင်းပျံ့ နေဆဲ ပေါ့.။ စံပယ် တဲ့. စံပယ်က ကျွန်မအတွက် အရေးပါတဲ့ ပန်းကလေး ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့တခါမှ မတွေးခဲ့ ဘူး။ အို ..မဟုတ်သေးပါဘူး။ဖြူဖွေး သန့်စင်တဲ့စံပ် လေးတွေအပေါ် ကျွန်မ အပြစ် လွဲမချသင့်ဘူး ထင်တယ်။ တကယ်တော့ အရိုင်းစပယ် ကသာ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ အောင်လင်းရဲ့အရိုင်းစံပယ်…။
နယ်သာလန်စ်နိုင်ငံက Giethoorn မြို့လေးဟာ သိပ်လှတဲ့သဘာဝတရား၊ ရှေးကျအိုဟောင်းပေမဲ့ လှလွန်းတဲ့အဆောက်အဦပုံစံ၊ တူးမြောင်းတွေထဲမှာ လှေစီးနိုင်ပြီး ချစ်စရာပေါင်းမိုးသစ်သားတံတားလေးတွေမှာ လမ်းလျှောက်ရင်း အရောင်စုံဖူးပွင့်နေတဲ့ပန်းလှလှလေးတွေ ငေးမောကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သိပ်ကိုရိုးရှင်းလှတယ်။ အနားယူအပမ်းဖြေဖို့အကောင်းဆုံး ခရီးပန်းတိုင်နေရာလေးမှာ ကားတွေရဲ့ ဆူညံသံတွေကင်းစင်နေမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခြေကျင်လမ်းသွားလမ်းလာများသာ သီးသန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရပ်ဝန်းလေးဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ မြို့လေးကျော်ကြားလာခဲ့တာက ၁၉၅၈ နောက်ပိုင်းမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဒတ်ခ်ျရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Bert Haanstra ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ဇာတ်မြူးရုပ်ရှင် Fanfare ကြောင့်ပါ။ Fanfare ကို Giethoorn မှာ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, July 17, 2016 Labels: နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
(၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဆောင်းပါးအဟောင်းပါ။)
တူရကီမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမယ့် ၂၅ ဦးမြောက်၊ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ရီဆက်ပ် တာရစ်ပ် အာဒိုဂန်ကတော့ ဗြောင်ကျကျရန်တုံ့လိုဟန်ရှိနေဆဲပါ။ ဇွန်လ ၇ ရက်သောကြာနေ့က အီစတန်ဘူလ်ရဲ့မနက်ခင်းစောစောမှာပဲ စုရုံးနေကြတဲ့လူစုလူဝေးကြီးအတွက် ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်တာက “အမိန့်စည်းကမ်းတွေကိုဆန့်ကျင်တာဟာ ဥပဒေချိုးဖောက်လုနီးပါး အနေအထားဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီတော့ အဲဒါကို ချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရမယ်” တဲ့။ မတိုင်ခင်တစ်ရက်ကလည်း သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲ ရှေ့ဆက်တိုးမယ် လို့ အာဒိုဂန်ပြောခဲ့သေးတယ်။ အာဒိုဂန် ရဲ့ အစီအစဉ်က အီစတန်ဘူလ်မြို့တော်ကြီးမှာကျန်နေသေးတဲ့ မြေနေရာလပ်စိမ်းစိမ်းအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တက်ခ်စင်မ်ဂစ်ဇီ(အပန်းဖြေ)ပန်းခြံကို တွယ်ရာမဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သွားမယ့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းပါ။ ၁၉၄၀ က ဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့ အော်တမန်အင်ပါယာ အထိမ်းအမှတ်စစ်တပ်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦးပုံတူနဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခု တည်ဆောက်ကြမယ့်စီမံကိန်ုးဟာ ပြည်သူတွေအပမ်းဖြေကြတဲ့နေရာကို ရှင်းလင်းပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ အီစတန်ဘူလ်သားတွေအတွက် မနှစ်မြို့စရာပါပဲ။
Posted by PhyoPhyo at Friday, July 08, 2016 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
မအိပ်ခင် ဒီသီချင်းလေး ၂ ခါ ၃ ခါလောက်နားထောင်၊ စာသားကြည့်လိုက်ဆိုကြည့်ပြီး အိပ်တော့မယ်။
နားထောင်တိုင်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ နားထောင်ရင်းအိပ်ငိုက်လာပြီ .....
Meghan Trainor ကို All about that Bass သီချင်းကနေ သတိထားနားထောင်မိသွားတာ။
စစချင်းနားထောင်တော့ မကြိုက်သလိုလို ကြိုက်သလိုလိုနဲ့။
အခုတော့ သူ့သီချင်းလေးတွေ နားထောင်မိတိုင်း/ ကြည့်မိတိုင်း မျက်စိမလွှဲနိုင်ဘူး။
me too လည်းသဘောကျသေးတာပဲ။
Posted by PhyoPhyo at Friday, July 08, 2016 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
လူသိနည်း ရှားပါး ပန်း(၁၀)မျိုးကို ဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Friday, July 01, 2016 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး, ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
hobbit တစ်ဦးလိုမြေအောက်တွင်းချိုင့်ထဲမှာနေပေမယ့် မနှစ်မြို့ဖွယ်မဟုတ်၊ ညစ်ပတ်မနေသလို စိုစွတ်မနေပါဘူး။ တီကောင်တွေတွန့်တွန့်လိမ်လိမ် ဟိုကဒီကထွက်ပြူလာစရာမရှိ၊ ရွှံ့ညွန်အနံ့လှိုင်နေမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ခြောက်သွေ့ပြီး ဗလာကျင်းနေတဲ့ သဲအပြည့်တွင်းချိုင့်လေးမှာ ထိုင်စရာမရှိ၊ စားသောက်စရာဗလာနတ္တိဖြစ်နေမလား။ အဲဒီအတွေ့အကြုံမျိုးတွေ ရလာနိုင်စရာမရှိတဲ့ hobbit hole ဆိုတာဟာ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး သိပ်လှတဲ့မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးတွေအောက်က တွင်းအိမ်လေးတွေပါ။ J.R.R. Toiken ရေးသားခဲ့တဲ့Hobbit and Lord of the Rings ထဲကလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ အစိမ်းရောင်အမိုးအကာရှိနေတဲ့မြေကြီးအောက်က hobbit အိမ်လေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ဟာရေတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဆိုတော့ ရေအောက်ကမ္ဘာလေးတွေထဲ စူးစမ်းရှာဖွေတဲ့ခရီးမသွားဖူးသေးဘူးဆိုရင် အတွေ့အကြုံပြည့်ဝတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တစ်ဦးလို့ ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ရေအောက်ထဲမှာဘာတွေရှိနိုင်မလဲ။ သန္တာကျောက်တန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊ ရေအောက်ပြတိုက်တွေ၊ နစ်မြုပ်နေခဲ့တဲ့သင်္ဘောပျက်ကြီးနဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာထူးခြားလှတဲ့ ရေအောက်ဟိုတယ်တွေရှိနေနိုင်တယ်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ရေအောက်ကမ္ဘာက ထူးခြားတဲ့နေရာလေးတွေကို လိုက်ကြည့်ရအောင်နော်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, May 01, 2016 Labels: Happy Birthday David! (2016)
ဟိုး အရင်က Spring နာမည်နဲ့ Perfect မဂ္ဂဇင်းမှာ ဘောလုံးစတားတွေအကြောင်း
Posted by PhyoPhyo at Saturday, April 30, 2016 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
ရော့ခ်ဂီတသမိုင်းထဲက ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာစာမျက်နှာပေါ်မှာရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဓိကသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကို အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါက ကတ်ကိုဘိန်းသေဆုံးမှုအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့ယူဆနေကြတာတွေကို ဖြေဖျောက်စေဖို့ ကြိုးပမ်းမှုနောက်တစ်ခုလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ ကိုဘိန်းကို အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဧပြီ ၈ ရက်နေ့က Seattle နေအိမ်မှာသေဆုံးနေတာတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ သူ့ရဲ့သေဆုံးမှုကို သေကြောင်းကြံစည်မှုလို့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လလယ်လောက်တုန်းက စုံထောက်တစ်ဦး ထင်ထင်ရှားရှားကိုင်ဆောင်ပြထားတဲ့ (သေကြောင်းကြံစည်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့) Remington shotgun တစ်လက်ပါ ဓာတ်ပုံ ၅ ပုံကို Seattle ရဲက ပြသခဲ့ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, March 31, 2016 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး
မော်ဒန် နိုင်ငံရေးနဲ့ သမိုင်းမှာ ပါလီမန်အဆောက်အဦတစ်ခုဟာ အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ အစုအဖွဲ့တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ မော်ဒန်ပါလီမန်တစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းတာဝန် ၃ ရပ်ရှိကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကတင်မြှောက်လိုက်ကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ခန့်အပ်တာ၊ ဥပဒေတွေပြဌာန်းတာနဲ့ အစိုးရကိုထိန်းချုပ်တာ (ကြားနာခြင်းနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း)စတဲ့လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ပါလီမန်အဆောက်အဦတွေဟာ အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားကြတယ်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကောင်းလှတဲ့ ပါလီမန်အဆောက်အဦတွေဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်။ ကမ္ဘာမှာ တည်ရှိနေကြတဲ့ ထူးခြားခမ်းနားလှတဲ့ ပါလီမန်အဆောက်အဦတွေအများကြီးထဲက အလှပဆုံး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းပါလီမန်အဆောက်အဦ ၁၀ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့မြောက်ဖျားပိုင်းက တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်မယ် စူးစမ်းလေ့လာမယ်
အာတိတ်ဒေသ ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်အစွန်းဆုံးအပိုင်းက တက္ကသိုလ်ဟာ လူသိများလာတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ညလယ်နေမင်းအလင်းနဲ့ မြောင်ပိုင်းအလင်းတန်းတွေရှိနေကြတဲ့ နယ်မြေ၊ ဒီဂြိုဟ်ကမ္ဘာကြီးမှာ ဂေဟစနစ်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိဆုံးနေရာမှာ ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ဆုံးပိုင်းကတက္ကသိုလ်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကြား လမ်းတစ်ဝက်၊ အာတိတ်ပင်လယ်ထဲ မြောက်ပိုင်းလတ္တီတွဒ် ၇၈ ဒီဂရီမှာတည်ရှိနေတဲ့ ကျွန်းစု Svalbard လို အံ့ဘနန်းဝေးကွာလှတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ University Centre in Svalbard (UNIS) တက္ကသိုလ် ဆီကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကျောင်းသားတွေ စုဝေးရောက်ရှိလာနေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့တည်ရှိနေမှုဟာ ဝေးလံခေါင်သီလှပြီး ကြမ်းတမ်းပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးရှိနေတဲ့နေရာတစ်နေရာဆီ နိုင်ငံတကာခရီးသွားတွေ ဘယ်လောက်အရေအတွက်များများရောက်တိုးပွားလာနေတယ်ဆိုတာ ပြသနေတာပါပဲ။ အဲဒါဟာ အာတိတ်ဒေသကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲဆွဲသွင်းနိုင်ဖို့ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာနိုင်ပါမယ်။ တက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီး ကျောင်းဖွင့်ချိန် အကြိမ်၃၀ ရှိခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ကျောင်းသား ၆၀၀ နဲ့ ဝန်ထမ်း ၇၅ ဦးရှိလာခဲ့ပါပြီ။ UNIS ဟာ နော်ဝေးဒေသခံ ၂၀၀၀ ခန့်နေထိုင်ကြတဲ့ စစ်မဲ့ဇုန် Svalbard ကျွန်းစုက Longyearbyen ရွာလေးမှာ တည်ဆောက်ထားတယ်။ နော်ဝေးလူမျိုးတွေပြီးရင် ရုရှားဟာ အဲဒီဒေသလေးမှာ အမြဲတမ်းအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံပါ။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, March 08, 2016 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
Posted by PhyoPhyo at Friday, March 04, 2016 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး, ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဟာ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ကိုးကားစရာမှတ်တမ်းတွေ လေ့လာဖတ်ရှု၊ ငှားရမ်းနိုင်တဲ့နေရာပါ။ စာကြည့်တိုက်ရဲ့ လက်ရွေးစင်စုဆောင်းထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ စာအုပ်တွေ၊ စာစောင်/ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ သတင်းစာ၊ လက်ရေးစာမူတွေ၊ ရုပ်ရှင်၊ မြေပုံ၊ ပုံနှိပ်စာလုံးတွေ၊ အချက်အလက်မှတ်တမ်း၊ စီဒီ၊ ကက်ဆက်ခွေ၊ ဗီဒီယိုတိတ်ပ်၊ ဒီဗီဒီ၊ Blue-ray၊ e-book, အသံထွက်စာအုပ်၊ database နဲ့ တခြား format တွေပါ စုံစုံလင်လင်ရှိကြတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစာကြည့်တိုက်တွေမှာဆိုရင် ရှေးအကျဆုံးစာရေနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ရွှံ့မြေစေးအချပ်ပြားမှာရေးသားထားတဲ့ ရှေးခေတ်ပါရှား၊ အဆီးရီးယားတို့မှာရေးသားခဲ့ကြတဲ့ Cuneiformm စာတွေသိမ်းဆည်းပြသထားကြတယ်။
သေနတ်ထိန်းချုပ်ရေး ဘယ်လိုဆောင်ရွက်လဲ - ကနေဒါနိုင်ငံမှာ သေနတ်တွေကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး ယေဘူယျလူဦးရေ နည်းနည်းပဲ သုံးခွင့်ရစေတယ်။ ကွဲပြားတဲ့သေနတ်အမျိုးအစားအပေါ်မှာ ဘယ်သူက ဝယ်ယူနိုင်မလဲ။ ဘယ်လို ဝယ်ယူနိုင်မလဲ စသဖြင့် အဓိကထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ စနစ်က ယူအက်စ်ရဲ့ ပိုတင်းကျပ်တဲ့ပုံစံလိုပါပဲ။ တချို့သေနတ်အမျိုးအစားပိုင်ဆိုင်မှုတွေတော့ရှိနေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ အင်မတန်လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, February 11, 2016 Labels: Gun Control, နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးစီမံချက်တွေဟာ အမေရိကမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သေနတ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တင်းကျပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တယ်။ အဲဒီကြေညာချက်ဟာ ယူအက်စ်မှာ တခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထက် သေနတ်အကြမ်းဖက်မှုတွေပိုပြီးများနေဆိုတဲ့ ဝေဖန်နေကြတဲ့ကိစ္စကို အကူအညီရစေမယ့်သဘောလို့ အိုဘားမားကပြောပါတယ်။ အမေရိကမှာ တခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထက် သေနတ်အသုံးပြုသတ်ဖြတ်မှုတွေ ပိုပြီးများနေပါတယ်။ အဲဒီကွဲပြားချက်တွေအတွက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက သေနတ်ဥပဒေတွေပါ။ ယူအက်စ်မှာ ကမ္ဘာ့တခြားနိုင်ငံထက် အလျှော့ပေါ့ဆုံး သေနတ်ဥပဒေတချို့ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေတွေဟာ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဘာကြောင့် လူတွေများများသေနတ်ရယူနိုင်ကြသလဲ။ သေနတ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်သလဲဆိုတာ ရှင်းပြနေသလိုပါပဲ။ ၂၀၀၇ ဆန်းစစ်လေ့လာချက်အရ ယူအက်စ်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အရပ်သားသေနတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်အများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ယူအက်စ်က လူ ၁၀၀ မှာ ၈၈.၈ ဦးက သေနတ်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဒုတိယလိုက်တာက ရီမန်ပါ။ လူ ၁၀၀ မှာ ၅၄.၈ ဦးပိုင်ဆိုင်နေကြတယ်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ ဂရိကို ပြန်လည်ကယ်တင်တဲ့အခါ
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, February 03, 2016 Labels: နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
ဂရိနိုင်ငံရဲ့ တအုံနွေးနွေးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဟာ နောက်ဆုံးတော့ ပွက်ပွက်ဆူသွားခဲ့ပြီ။ နိုင်ငံရေးရော ဘဏ္ဍာရေးပါ အတွေ့အကြုံများများစားစားရလိုက်ပါပြီ။ ATM စက်ကနေ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ဖို့ ဂရိနိုင်ငံသားတွေ အခက်ကြုံခဲ့ရတယ်။ အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာတင်ရှိနေတဲ့ ဂရိရဲ့ ကြွေးမြီတွေရှင်းလင်းပေးဖို့ ပျက်ကွက်မှုဟာ နိုင်ငံတွင်းမှာလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်လာတော့တယ်။ ဂရိနိုင်ငံရဲ့ ထူးကဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ ဥရောပရဲ့ အလွန်ခိုင်မာအားကောင်းပုံရနေတဲ့ တစ်ခုတည်းသောယူရိုငွေကြေးကို စွန့်ခွာလိုက်ဖို့ အတင်းအကျပ်တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်နေပါပြီ။ အလွမ်းဇာတ်အားလုံးမှာကြည့်လိုက်ရတာက ဂရိဟာ တော်တော်သေးနုပ်နေပြီး စီးပွားရေးအရလည်း အရေးမပါလှတဲ့နိုင်ငံလိုဖြစ်နေတော့တယ်။ ဂရိအကျပ်အတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်တွေအများကြီးထဲမှာ ဂရိနိုင်ငံအကြောင်း တကယ့်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, February 03, 2016 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
Movie Theater (Cinema) တွေဆိုတာ ဖြေဖျော်ရေးအတွက် ရုပ်ရှင်တွေကို ပရိသတ်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် နေရာပါဝင်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေအားလုံးကတော့ စီးပွားဖြစ်လက်မှတ်ရောင်းချပြီး ပြသကြတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေဟ အကျိုးအမြတ်မပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အသင်းအဖွဲ့တွေထဲက အဖွဲ့ဝင်တွေ အဖွဲ့ဝင်ကြေးပေးပြီး ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ကြဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြစက်(movie projector) ကိုသုံးပြီး ရုပ်ရှင်ပိတ်ကား (projection screen) မှာ အရုပ်တွေထင်စေတယ်။ နံရံတွေမှာ မြှုပ်ထားတဲ့ စပီကာတွေကနေအသံကနေ စကားပြော၊ လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အသံနဲ့ ဂီတတေးသံတွေဖြတ်ထွက်လာစေတယ်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေကတည်းက subwoofer တွေအသုံးပြုနေခဲ့ကြပါပြီ။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, February 03, 2016 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
Janet Damita Jo Jackson ဟာ Joe နဲ့ Katherine Jackson တို့ရဲ့ အငယ်ဆုံးသမီးလေးပါ။ ပေါ့ပ်စတား Janet ဟာ အကနည်းပြ Rene Elizondo နဲ့ တိတ်တိတ်လေးလက်မထပ်ခင်တုန်းက အဆိုတော် James DeBarge နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သားသမီးမရှိခဲ့ပါဘူး။ Janet တို့ စုံတွဲ ၂၀၀၀ မှာ ကွာရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၂၀၁၂ မှာ စီးပွားရေးသမား Wissam Al Mana နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Janet ဟာ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဂီတဖြေဖျော်ပွဲတွေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Janet မှာ ကင်ဆာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လတ်တလော အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ Janet ကတော့ "ကောလဟာလတွေပါ အမှန်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မမှာ ကင်ဆာမရှိပါဘူး။ ကျွန်မ နေပြန်ကောင်းနေပါပြီ" လို့ Twitter မှာတင်လိုက်တဲ့ video ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ From my lips လို့ ခေါင်းစဉ်တင်ထားပြီး သူမရဲ့ The Great Forever ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုလည်းတင်ထားလိုက်တယ်။